Farqiga u dhexeeya kabaha ilaalinta shaqada iyo kabaha caadiga ah waxaa intooda badan ka muuqatay in 3 dhibcood - Shiinaha Gaomi Ruigu Protection Labor
Farqiga u dhexeeya kabaha ilaalinta shaqada iyo kabaha caadiga ah waxaa intooda badan ka muuqatay in 3 dhibcood
Farqiga u dhexeeya kabaha caymiska shaqada iyo kabaha caadiga ah waxaa inta badan ka muuqda 3 dhibcood, waxaan rumaysanahay in aad tahay cajiib ah oo ku saabsan waxa 3 dhibcood ka muuqda.
1.According in ay kala duwan yihiin in falsafada design, kabaha ilaalinta shaqada waxaa loogu talagalay si ay u ilaaliyaan ammaanka cagaha ka mid ah dadka ka shaqeeya. Sidaa darteed, ammaanka waa arrin aasaasiga ah in la tixgeliyo in design ah.
Maxaa kabaha caadiga ah u aragto more waa qurux, raaxo, moodada, la qaadi karo, waa in tiraan baahida macaamiisha oo keliya.
Farqiga 2.Beerta waxaa laga arkay meesha isticmaalka: inta badan meelaha isticmaalka kabaha ilaalinta shaqada ku jira meelaha hawlgal gaar ah sida workshop electroplating, goobta dhismaha iyo warshad mishiino waaweyn.
kabaha caadiga ah waxaa asal ahaan loo isticmaalo socodka, ganacsiga iyo goobaha caamka ah sida xafiisyada oo aan khataraha waaweyn.
3. Marka laga eego dhinaca samaynta qalabka kabaha naftooda, kala duwan waxaa lagu arki karaa: kabaha caadiga ah guud ahaan lagu sameeyo qalabka caadiga ah, sida alaabo dusha maro dhar, maqaar macmal ah, iwm, halka kabaha ilaalinta shaqada waa in la sameeyo qalabka madhxiya wanaagsan , qalabka electrostatic, xuso, iska caabin heerkulka sare iyo qalabka kale ee gaarka ah.
In aan ku xuso calaacalaha, kabaha caadiga ah inta badan waa Addidas oo TPR ah, ka suuqa ee hadda, kabaha ilaalinta shaqada inta badan waa isticmaalka ay calaacalaha caag ama calaacalaha PU.
waqti Post: Aug-28-2018